Fahasamihafana eo amin'ny firaka sy ny Amalgam | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny firaka sy ny Amalgam | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Simia / Simia indostrialy / Fahasamihafana eo amin'ny Alloy sy Amalgam
Fahasamihafana eo amin'ny firaka sy ny Amalgam
5 Novambra 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny firaka sy ny amalgam dia ny firaka iray misy fitambarana metaly sy tsy metaly fa ny amalgam kosa dia misy fitambarana metaly .
Ny firaka sy ny amalgams dia mifangaro amin'ny singa samihafa ao anatin'izany ny metaly. Samy hafa ny fampiasany sy ny fananany. Ny firaka sy ny amalgam dia samy manana ny mampiavaka azy ireo noho ny fitaovana fanombohany.
2. Inona ny firaka
3. Inona ilay hoe Amalgam
4. Fampitahana mifanila - Alloy vs Amalgam amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Alloy?
Ny alika dia fitambarana metaly. Ny firaka dia misy singa vy farafaharatsiny miaraka amin'ireo singa hafa. Ny alloys dia nanatsara toetra raha oharina amin'ny fananan'ny singa tokana namboarina. Azontsika atao ny mahazo ireo fananana ireo amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo singa amin'ny isan-jato isan-jato. Noho izany, manome ny fananana tadiavina izy ireo amin'ny fampifangaroana metaly sy singa samihafa amin'ny habe samihafa. Saika ny firaka rehetra dia misy famirapiratanana noho ny fisian'ilay singa vy. Ny alloys koa dia afaka mitondra herinaratra noho ny fisian'ny singa vy.
Azontsika atao ny manasokajy ny alika amin'ny fomba samihafa. Ohatra, izy ireo dia mety ho homogenous na heterogeneous. Ny metaly homogenous dia misy singa zarazaraina amin'ny fomba mitovy. Ny alikaola heterogène kosa dia manana singa nozaraina tamin'ny fomba tsy voalamina.
Sary 01: Karazana firaka samihafa
Ankoatra izany, misy substitutional sy interstitial alloys . Ny firaka mifototra amin'ny lalàm-panorenana dia alika vy namboarina avy tamin'ny fanoloana atoma vy iray tamin'ny atoma vy hafa mitovy habe aminy. Ny firaka interstitial dia firaka metaly noforonina tamin'ny alàlan'ny fampidirana atômika kely kokoa ho ao anaty lavaky ny makarakara metaly.
Inona ny atao hoe Amalgam?
Ny Amalgam dia fifangaroan'ny metaly samihafa izay ampiasaina ho famenoana nify amin'ny fitsaboana nify. Io no famenoana nify mahomby sy mahazatra indrindra ampiasaintsika ankehitriny. Indraindray antsointsika hoe "amalgam volafotsy" izy io satria miseho amin'ny loko volafotsy. Amin'ny ankapobeny, ity fitaovana famenoana ity dia misy mercury misy rano sy fifangaroan'ny metaly vy. Azontsika ampiasaina izy io hamenoana ny lava-nify ka hisorohana ny lo nify.
Sary 02: Famenoana nify i Amalgam
Amin'ny ankapobeny, ny amalgam dia misy merkiora (50% eo ho eo) miaraka amin'ny volafotsy, tin, varahina, ary singa hafa hafa. Rehefa mamorona an'ity famenoana ity izy dia mila mampiasa fitaovana fampifangaroana aloha ny mpitsabo nify ary afangaroy ny firaka mifototra amin'ny volafotsy mandra-pahatonga ho mando tanteraka. Avy eo, ny mpitsabo nify dia tsy maintsy mampiditra an'io feta io ao anaty lavaka alohan'ny hametrahana azy. Matetika ny amalgam dia mivelatra manodidina ny 0,1% mandritra ny fotoana maharitra 6-8 ora.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny firaka sy ny Amalgam?
Ny firaka sy ny amalgam dia mifangaro amin'ny singa samihafa ao anatin'izany ny metaly. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny firaka sy ny amalgam dia ny firaka iray misy fitambarana metaly sy tsy metaly fa ny amalgam kosa dia misy fitambarana metaly. Amin'ny ankapobeny, ny amalgam dia misy merkiora, volafotsy, firapotsy, varahina ary singa hafa hafa.
Ankoatr'izay, ny alloys dia manana fampiharana lehibe isan-karazany ao anatin'izany ny sehatry ny fanamboarana, ny fanamboarana kojakoja ao an-dakozia, sns. Mandritra izany fotoana izany, ny amalgam dia ampiasaina ho fitaovana famenoana nify hisorohana ny lava-nify. Ny mpitsabo nify dia manao ny fangaro amalgam amin'ny fotoana anaovana ny fampiharana; tsy maintsy afangaron'izy ireo amin'ny alika volafotsy mifototra ny mercury ary apetaka ao anaty lavaka alohan'ny hametrahana azy ireo.
Ity ambany ity ny infographic dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny alikaola sy amalgam.
Famintinana - Alloy vs Amalgam
Ny firaka sy ny amalgam dia mifangaro amin'ny singa samihafa ao anatin'izany ny metaly. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny firaka sy ny amalgam dia ny firaka iray misy fitambarana metaly sy tsy metaly fa ny amalgam kosa dia misy fitambarana metaly.
1. “Amalgam (Dentistry).” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 4 Okt. 2019,Hita eto .
2. “Firaka.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 12 Jolay 2019, Azo jerena eto .
3. Murty, Bs, et al. "Tantara fohy momba ny firaka ary ny fahaterahan'ny firakotra avo lenta." Alloys-Entropy avo lenta, 2019, pp. 1-12, doi: 10.1016 / b978-0-12-816067-1.00001-1.
1. "Fandaminana atomika mirindra mampiseho ny karazany isan-karazany" Nosoratan'i Zaereth - Asa manokana (CC0) via Commons Wikimedia
2. “Fenoy amalgam” Nosoratan'i Enzo Carretta - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny firaka sy aliminioma Fahasamihafana eo amin'ny fandoroana olona betsaka sy ny fandoroana rano amin'ny rindrin'ny rano ao amin'ny MSW Fahasamihafana eo amin'ny vy malefaka sy ny vy vita amin'ny vy Fahasamihafana eo amin'i Octane sy Cetane Fahasamihafana eo amin'ny RON sy MON
Fahasamihafana eo amin'ny Guitar Epiphone sy Guitar Gibson
Fahasamihafana eo amin'ny MP3 sy ny WAV
Fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-mientana sy ny commensalism
Fahasamihafana eo amin'ny Math Abacus sy ny Vedic Math
Fahasamihafana eo amin'ny herin'ny AC sy DC